केरुङ काठमाडौं रेलमार्गः नेपालले दिएन चासो ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»पत्रपत्रिका»केरुङ काठमाडौं रेलमार्गः नेपालले दिएन चासो ?
By रबि धिताल on १५ माघ २०७४, सोमबार ०१:५५ पत्रपत्रिका
काठमाडौँ, माघ १५: केरुङ काठमडौं अन्रदेशीय रेलमार्ग बनाउन चीन सकारात्मक भईरहेको बेला नेपाल सरकारले भने चासो दिएको छैन । उक्त योजना अगाडि बढाउने जिम्मा नेपाल सरकारसँग रहेको संकेत गर्दैै चिनिया टोली फर्किएको लामो समय हुँदा पनि सरकारी पक्षबाट कुनै काम अगाडि नबढाईएको हो ।
कात्तिक २४ गतेन काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल चीन संयुक्त स्थलगत अध्ययनपछि चिनियाँ अधिकारी र नेपाली अधिकारीबीच दोस्रो चरणको बैठक २०१७ डिसेम्बरमा बेईजिङमा बस्ने समझदारी भएको थियो । तर नेपाली पक्षबाट चासो नदिइँदा अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन ।,